(၂၁)ရာစု ပင်လုံညီလာခံ အကြို ငြိမ်းချမ်းရေးတွဲလက်များ(Wheel Chair) ရထားအဖွဲ့ မော်လမြိုင်မြို့ရောက်ရ? - Yangon Media Group
(၂၁)ရာစု ပင်လုံညီလာခံ အကြို ငြိမ်းချမ်းရေးတွဲလက်များ(Wheel Chair) ရထားအဖွဲ့ မော်လမြိုင်မြို့ရောက်ရ?
မော်လမြိုင်၊ ဧပြီ ၁
(၂၁)ရာစု ပင်လုံညီလာခံအကြို ငြိမ်းချမ်း ရေးတွဲလက်များ(Wheel Chair)ရထားအဖွဲ့သည် တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး ကော့သောင်းမြို့မှ မွန် ပြည်နယ် မုဒုံမြို့နယ်မှ တစ်ဆင့် ဧပြီ လ ၁ ရက် နံနက် ၉နာရီတွင် မော်လမြိုင်မြို့သို့ ရောက်ရှိရာ ဌာနဆိုင်ရာများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဒေသခံပြည်သူများ၊ လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများက ကြိုဆိုခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ငြိမ်းချမ်းရေးတွဲလက် များအဖွဲ့ကို မြန်မာနိုင်ငံ ခရစ်ယာန် မျက်မမြင်များ မိတ်သဟာရ၊ ခဝဲ ခြံမျက်မမြင်ကျောင်းမှ အုပ်ချုပ်မှု ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး ဦးသိန်း လွင်က ဦးဆောင်ပြီး အမြင်အာရုံ ချို့တဲ့သူ ၁ဝဦး၊ ကိုယ်အင်္ဂါမသန် စွမ်းသူ ၁ဝဦး၊(Wheel Chair)စီမံအုပ်ချုပ်သူ ရုံးအဖွဲ့ ၃၅ဦး၊ ကူ ညီသူ ရှစ်ဦး၊ စုစုပေါင်းအင်အား ၆၃ဦး ပါဝင်သည်။
”ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က မတ် ၁၄ ရက် ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ တန င်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ကော့သောင်း ကိုသွားတယ်။ ၁၆ရက်မှာ ကော့ သောင်းကိုရောက်ပြီး ကော့သောင်း ကနေ မတ် ၁၈ရက်က စတင်ပြီး ထွက်ခွာခဲ့တယ်။ ဒီကနေ့ မော်လ မြိုင်မြို့ကို ရောက်ပါတယ်။ ခရီးစဉ်က တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မွန်ပြည် နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဆိုပြီး ခရီးစဉ်ဆွဲထားပါတယ်။ မြို့ ပေါင်း ၂၁မြို့၊ မိုင်အားဖြင့် ၈၅ဝ မိုင်သတ်မှတ်ထားပြီး ဒီကနေ့အထိ မြို့ပေါင်း ၁၃မြို့ မိုင်ပေါင်း ၆ဝဝ ကျော်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ည မော်လမြိုင်မှာ ညအိပ်ရပ်နား ပြီး မနက်ဖြန် နံနက် ၇နာရီမှာ ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်မြို့ ကို ဆက်ပါမယ်။ ဧပြီ ၈ရက် ရန်ကုန်မှာ ခရီးဆုံးပါမယ်”ဟု အဆိုပါအဖွဲ့၏ မီဒီယာတာဝန်ခံ ဦးဇေယျမင်းသျှင်က ပြောကြား သည်။
အဆိုပါအဖွဲ့သည် ညအိပ်ရပ် နားသည့် မြို့ရောက်တိုင်း ညဘက် တွင် ခဝဲခြံမျက်မမြင်ကျောင်းမှ ဂီတအဖွဲ့ဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖျော် ဖြေပွဲများ ကျင်းပပြီး ပြည်သူများ ၏ဆန္ဒပြုလက်မှတ်များ တောင်း ခံ မှတ်တမ်းပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပါက ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒပြုလွှာများကို စုဆောင်းပြုစု၍ မကြာမီကျင်းပ မည့် (၂၁)ရာစု ပင်လုံညီလာခံ တတိ ယအကြိမ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေး နွေးပွဲသို့ တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မိတ္ထီလာမြို့နယ်တွင် ၁ဝ ဘီးယာဉ်တစ်စီး အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ သရက်ပင်ချောင်းအတွင်း ထိုးကျတိမ်?
မူဆယ်မြို့၌ ဆိုင်ကယ်စီး အမျိုးသားသုံးဦးက အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား ဓားဖြင့်ခုတ်ကာ ငွေလုယူ၍ သေန
မပျော်မရွှင် ဖြစ်နေသော်လည်း နည်းပြနှင့် ပြဿနာမရှိဟု ဗီဒဲလ် ရှင်းလင်း
ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး အမျိုးသမီး ဂီတပညာရှင်ဖြစ်လာတဲ့ ရီဟားနား
ပုဂံဒေသနှင့် ပတ်သက်၍ စီမံခန့်ခွဲမှု အမှားများကြောင့် ပုဂံအမွေအနှစ် စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီက
အမျိုးသားစာပေတစ်သက်တာဆုရ ဦးဝင်းမွန်(တက္ကသိုလ်ဝင်းမွန်) ကွယ်လွန်
ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လျင်မြန်စွာပြုလုပ်နိုင်သည့် စီမံကိန??
ရွှေစက်တော် ဘုရား၌ မိုးခို ဈေးရောင်းနေသူများအား ကြော်ငြာစာပေး၍ နေခွင့်မပေးသည့်ကိစ္စ သတင်းစ